Budget smartphone Nokia 2.3 yakawana kuzvitonga kuzosvika pamazuva 2 | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
HMD Global yazivisa itsva bhajeti yefoni kuEjipitori. Panguva iyo vazhinji vaitarisira kuburitswa kweNokia 8.2, kutaura zvazviri, chiitiko ichi chakaitirwa kuburitsa Nokia 2.3.
Iyi yekupinda-level gadget neakanaka dhizaini uye anozvitonga anosvika kumazuva e2. HMD Global inotaura kuti chishandiso chakagadzirira kushanda neAndrew 10 uye gare gare. Iyo zvakare inopikira 2 makore ekugadzirisa software uye 3 makore ekuchengetedza kuchengetedza.
Nokia 2.3 inogona kuramba iri imwe yemafoni ekupinda-level yakaburitswa mu2019 gore. Kunyangwe kuvepo kwechizororo, icho vazhinji vezvishandiso zviripo, chikamu chavo chekumashure chakashanduka kuva chinotaridzika. Kumashure kune polymer shell ine magadzirirwo matatu-matatu nanotextured dhizaini.
Nokia yakagadzira zvakare yakanaka-inobata ruvara rwemavara-scheme - bhuruu-girazi (cyan), iyo inokwezva kutarisisa, beige uye grey (marasha). Kufanana nemamwe mafoni mafoni eNokia, ino yakawana bhatani rakasiyana rekufonera Google izwi rekubatsira.
Nokia Lumia 625 Smartphone: Zvimiro, Parameter uye Zvimiro
Smartphone Nokia 1030: ongorora, tsanangudzo, tsananguro uye ongororo
Maitiro ekuisa rwiyo pane runhare pa "Lumiya"? Smartphone Nokia Lumia: kuraira
Budget smartphone ine yakanaka kamera. Ongororo yeema smartphones, mitengo
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,407 masekondi.